Matanho Anooneka: Mavhidhiyo uye Mhedzisiro Midhiya | Martech Zone
Matanho Anooneka inopa vamiririri uye makuru mabhurandi nemukana wekugovera zvinyorwa zvavo kune vanoona vanoona. Chikuva chavo chinosvika pamusoro pevane mamirioni 380 vanoona vhidhiyo mwedzi wega wega. Parizvino, ivo vayera 3 trillion mavhidhiyo ekuona, anopfuura mamirioni mazana mashanu mavhidhiyo, uye anopfuura zviuru gumi zvemashambadziro ekushambadzira.
Matanho Anooneka anounza chaiyo sarudzo-yakavakirwa vhidhiyo kushambadzira kumunhu chaiye panguva yakakodzera pane iye muparidzi chaiye, kubatsira vashambadziri vemakambani kurwisa kupatsanurwa kwemidhiya nekukwiridzira kune vakawana vanoona.
Matanho Anooneka yakanyatsogadzira metric dzinoshanda dzaibvumidzwa neMedia Rating Council, iro indasitiri boka rinoongorora uye kubvumidza midhiya kuyerwa masevhisi:
Chokwadi Reach ™: Nyika yekutanga yeMRC-yakatenderwa kuita metric kune yakabhadharwa, muridzi, uye akawana midhiya.
Mugove weSarudzo Sarudzo ™: Yekutanga-ye-yayo-mhando metric yekuyera hama brand performance mune yakasarudzika-based vhidhiyo.
Vhidhiyo Engagement: Metric performance inoratidza maratidziro anoita vanhu nemavhidhiyo emavhidhiyo.
Matanho Anooneka inobata mishandirapamwe yevhidhiyo yevakawanda vevashambadzi vane mukurumbira pasirese, seP & G, Ford, Microsoft, uye Unilever, pamwe nemasangano enhau akaita saStarcom MediaVest, Mindshare, uye Omnicom, Visible Measure ane chinzvimbo chimwechete muindasitiri yevhidhiyo.
Tags: yakawana midhiyaKushambadzira Vhidhiyomugove wesarudzokusvika chaikomavhidhiyo kushambadzavhidhiyo analyticsvideo distributionvhidhiyo kubatanidzwamatanho anooneka